Izay hametraka-ons no tianao ho havaozina?
fanontaniana Izay hametraka-ons no tianao ho havaozina?
1 taona 11 volana lasa izay #614 by rikoooo
Aho fandefasana ity hafatra ity mba hahafantatra hoe iza hametraka-ons ianao te-ho ny ankamaroany havaozina, toy ny amin'izao fotoana izao aho handeha vaovao farany vitsivitsy, ianao, dia tena manampy ahy mba hahafantarany izay tianao indrindra.
Ary teny an-dalana, raha afaka koa omeo ahy ny rohy any amin'ny iray nohavaozina Bible (avy amin'ny vohikala iray hafa) dia ho mahafinaritra.
Misaotra anareo rehetra
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: Gh0stRider203, Jodsalz1, Bubble @ Ondry
1 taona 11 volana lasa izay #615 by Dariussssss
OK Voalohany indrindra, misy fahadisoana ...
A320 Mega Pack, doza foana. Miovaova be izany eo an-tanako FSX, Tsy fantatro ny antony.
Thomas Ruth A330 / 340, PFD tsy mampiseho na fihinanam-bilona sy ny overspeed ... mihitsy.
Emirates sambo, tena ratsy FPS, nianjera ny FSX ...
Azo atao ny vaovao farany ...
Eny ary, dia ho mahaliana ny toa hamihina ny A330 / 340 amin'ny TR, miaraka amin'ny A320 Mega Pack, marina kokoa mba hamihina ny cockpit izay tsara.
A380, zavatra mitovy, dia tsy mampiseho PFD roa sy ny overspeed fihinanam-bilona.
Raha mahatsiaro zavatra hafa, hataoko eo eto.
1 taona 11 volana lasa izay #616 by Gh0stRider203
Dariussssss, dia izay tena mora vahaolana !!!
1) esory ny fiaramanidina Airbus;
2) Fafao INONA NA INONA akory Airbus
3) manolo izany amin'ny Boeing
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: denpic
1 taona 11 volana lasa izay #617 by D115
Tiako ny mahita ny Boeing 757 amin'ny toetra VC kelin'ny amin'ny ho avy. Mino aho fa efa nahatsiaro ny 757 FSX tsara tarehy.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: Bubble @ Ondry
1 taona 11 volana lasa izay #619 by Gh0stRider203
D115 nanoratra hoe: Tiako ny mahita ny Boeing 757 amin'ny toetra VC indraindray amin'ny ho avy. Mino aho fa efa nahatsiaro ny 757 FSX tsara tarehy.
Raha toa ianao vonona ny handany ny $, ny Quality Wings 757 dia somary mendrika
1 taona 10 volana lasa izay #649 by julian1245
Fa ny sasany amin'ireo fiaramanidina manao kofehy ireny ny milina fotsiny satria toa ka ratsy, ka mbola tsy mihodina #realism
1 taona 10 volana lasa izay #669 by macca22au
Na iza baovao ho P3D4 araka izay azo atao, ary VCs tanteraka.
Fa ny vaovao farany v4 ny A320 sy B737-800 raha vao ny mpanoratra tiany ......
1 taona 10 volana lasa izay #671 by jakedertree
Aho tia ny tsara kokoa ho an'ny Airbus VC A400M. Ary koa, raha ny mpanoratra mety ho afaka manome torolalana ny sasany mba tsy hanaovanao azy ny tànany, feno eo amin'ny tany, izay Te ho mahatalanjona. Tsy mandositra mafy, ka tsy afaka (ary tsy fantatro) mitady fomba mahafinaritra fanaon'ilay vorona ny fitaovana mandritra ny fiarakaretsaka.
1 taona 10 volana lasa izay #673 by sergiozaki
ny Boeing 777 pls for P3D v3 / v4
Full miasa VC tontonana plss ...
1 taona 10 volana lasa izay #674 by sergiozaki
Ny A380 P3D v3 / v4
Gauges tontonana, tena VC ny 380 ny
Fotoana mamorona pejy: 0.253 segondra